C/wali Maxamed Cali (Gaas) oo saakay ka qoraacday koonkurta gaalkacyo(Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
C/wali Maxamed Cali (Gaas) oo saakay ka qoraacday koonkurta gaalkacyo(Daawo Sawirada)
Madaxweynaha maamulka Puntland C/wali Maxamed Cali (Gaas) oo ay wehliyaan Ra’iisul Wasaaraha Somaliya Madaxweynaha Jubbaland iyo xubno kale ayaa saaka tagay Koonfurta Magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug.
Masuuliyiintaan ayaa Koonfurta Magaalada Gaalkacyo waxaa ku soo dhaweeyay Madaxweynaha Maamulka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed, waxaana si wadajir ah ay ugu quraacdeen xubnahan Hotelka Five Star ee Koonfurta Magaalada Gaalkacyo.
Xubno ka tirsan Wafdiga ayaa u xaqiijiyay warbaahinta tegitaanka Konfurta Magaalada Gaalkacyo Madaxweynaha Maamulka Puntland, waxaana arintani ay qayb ka tahay dadaalka nabadeed ee Ra’iisul Wasaaraha Somaliya uu ka wado Magaalada Gaalkacyo.
Ilo Wareedyo ayaa inoo xaqiijiyay in Madaxweynaha Galmudug dhankiisa lagu wado inuu tago Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo oo maanta halkaasi lagu soo wada qadeeyo sida qorshaha uu yahay.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Cumar C/rashiid ayaa dadaalka ugu badan wuxuu ku bixinaya sidii loo dhaqangelin lahaa heshiiska Magaalada Gaalkacyo ay ku kala gaareen Maamulada Galmudug iyo Puntland.
Sida hada muuqata rajada ahaa ah mid wanaagsan oo dhanka Nabadda u dhaw, kol hadii Madaxweynaha Puntland uu si nabad ah ku tagay Koonfurta Magaalada Gaalkacyo, saakana uu ka quraacday.
Ciidamada isku hor fadhiya Magaalada Gaalkacyo ayaa lagu wadaa goor dhaw in la kala qaado, xaalada Magaalada Gaalkacyo lagu soo celiyo sidii hore.
Dadkii ku dhaawacmay dagaaladii Gaalkacyo oo loo soo qaadayo Muqdisho
Heshiiskii lagu gaaray magaalada Gaalkacyo ayaa lagu wadaa in la dhameystiro maanta